तनहुँका नेकपा सांसदले भने - रामचन्द्रजी, विमानस्थल पनि उद्घाटन गरेर फर्किनू ! - Himali Patrika
तनहुँका नेकपा सांसदले भने – रामचन्द्रजी, विमानस्थल पनि उद्घाटन गरेर फर्किनू !
हिमाली पत्रिका १८ मङ्सिर २०७७, 4:13 pm
भानु नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट विजयी उदयराज गौरी मेयर हुनुहुन्छ । मेयरले को हो संघीय सांसद ? भनेपछि मैले रोकेकै हो । फेरि भन्छु, रोकेकै हो । विधिसम्मत भएन भने रोकिन्छ ।